कोरोनाः यथार्थ र आवश्यकता - समय-समाचार
कोरोनाः यथार्थ र आवश्यकता
समय-समाचार मंगलबार, २०७७ भदौ २३ गते, १२:०० मा प्रकाशित
कोभिड-१९ को महामारीसँग यतिबेला पुरै विश्व जुधिरहेको छ । चीनको वुहान हुँदै फैलिएको संक्रमण अहिले विश्वभर नै छ । संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा कमी आउने सकेको छैन । विशेष गरी दीर्घरोगी यसको चपेटामा परेका छन् । लाखौं मानिस यो सँग लडिरहेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले त स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा समेत गरिसकेको छ । कोरोनाको लक्षण देखिन दुई हप्ता कुर्नुपर्ने र सजिलै एक अर्कामा सर्न सक्ने भएकाले यसको जोखिम उच्च छ । रुस र चीनमा यसका विरुद्ध काम गर्ने प्रभावकारी औषधी तयार गर्न वैज्ञानिकहरु दिनरात लागिरहेका छन्, अन्य प्रयासरत छन् । विकसित देशले महामारीलाई परास्त गर्न खोप निकाल्ने हाेडबाजीमा लागेका छन् । विकासोन्मुख देशमा यसको उपचार असम्भवप्रायः नै देखिन्छ । मात्र मानिस जोखिम न्युनिकरणको उपायलाई अबलम्बन गरिरहेका छन् ।
कतिपय कुरा हाम्रो हातमा हुँदैनन्, समयलाई कुर्नु बाहेक हामीसँग केही विकल्प हुँदैन । नेपालमा दुई–चार जनामा देखिँदा जुन तरिकाको सावधानी मानिसहरुहले अपनाएका थिए, अहिले त्यो देखिँदैन । कतिले काेराेना नै हो र ? भनेर सामान्य सोचिदिनाले पनि संक्रमण फैलिएकाे छ । विश्वका अन्य मुलुकमा देखिएको लक्षणहरुसँग दाँज्दा नेपालमा केही अंश मात्र मिलेको देखिन्छ । असावधानी रहने हो भने महामारीको शिकार बन्नेले उपचार पाउन मुस्किल हुनेछ । सिमित पूर्वाधारमा समेटिएका हामीकहाँ त्यस्ता मात्र स्वास्थ्य उपचार केन्द्र छन् जहाँ स्वास्थ्य प्रोटोकल नै अपुरो छ । अधिकाँश अहिले संक्रमित भएर कोही आइसोलेसन त कोही जीवन मरणको दोसाँधमा छन् । अझ कतिपयले त अकालमा ज्यान पनि गुमाउनु परिरहेको छ । यो सामान्य हैन, न त कुनै भ्रम नै हो । विकसीत देशहरुमा अत्याधुनिक स्रोत र साधन अपनाउँदा त लाखाैंको ज्यान गइरहेको छ भने झन् हामो जस्तो देशमा के होला ? एकपटक संवेदनशील भएर सोच्न जरुरी छ । हाम्रो राज्यसँग क्षमता अति सिमित छ । सिमित श्रोत र साधनमा यो महामारी नियन्त्रण गर्न सरकार लागि परिरहेको छ । अनावाश्यक रुपमा सरकारले यो गरेन, त्यो गरेन भनेर आलोचना गर्नु भन्दा हामी आफैँ सचेत हुनुपर्छ ।
राज्यसँग संक्रमण न्युनिकरणको लागि दक्ष जनशक्ति, स्वास्थ्य सामाग्री, आवश्यक पूर्वाधार, साधन स्रोतहरु सबै सिमित छन् । कमजोर पूर्वाधार र स्रोतका बाबजुत पनि सरकारले नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको छ । आँफूलाई आधुनिक, शक्तिशाली, धनी र सुविधासम्पन्न ठान्ने मुलुकका जनताले त सावधानी अपनाउने बाहेक अन्य प्रगति भएको छैन् भने नेपाल जस्ता मुलुकमा सरकारको मुख मात्र ताक्नु मुर्खता हुन्छ ।